Firaisana ara-nofo, mety hampitahotra ihany koa…
Raha ny tokony ho izy dia fotoana iray mamy dia mamy, ifanomezana fahafinaretana, ny firaisana ara-nofo. Saingy indraindray anefa, misy tranga miteraka tahotra na tebiteby be loatra, ka tsy araka ny nieritreretana azy ny zava-nitranga. Mitantara ny efa niainany, momba izany, ireto vehivavy 4 ireto…
Sorayah, 27 taona : Lehibe loatra
Efa fomba amam-panao tsy vaovao intsony ny « fellation » eo amin’ny mpifankatia. Na izaho koa aza dia efa mba nanome fahafinaretana ny olon-tiako, tamin’ny fanafosafoana azy amin’ny vava, na dia tsy ankafiziko manokana aza izany. Fa nisaraka ary izahay ary niaraka tamin’olon-kafa vaovao aho. Mampitebiteby foana moa ny firaisana ara-nofo voalohany atao, fa vao mainka tena raiki-tahotra aho raha nahita fa lehibe lavitra ny taovam-pananahany, raha mitaha amin’ny an’ilay lehilahy niaraka tamiko teo aloha, sady amin’izay nangataka « fellation » izy. Nitady irika nialana aho tamin’izay dia tsy nifanao fotoana taminy intsony.
Nanou, 31 taona : Loharano miboiboika
Firaisana ara-nofo voalohany nataoko tamin’ny vadiko ity tantaraiko ity. Efa nisy olona niaraka tamiko ihany talohany, fa ny azy dia tena niavaka. Tena naka fotoana be izy tamin’ny savaranonando : safosafo izany, oroka izany, teny mamy isan-karazany… Tsy mbola niaina zavatra ohatr’izany aho. Fa tsy nampoiziko koa hoe : hay izaho ity “femme fontaine”. Ilay savaranonando elabe sy tsara be angamba no nanaitra an’ilay loharano ! Natahotra be aho, sao nivalan-drano, na marary. Ilay vadiko no nanazava tamiko fa “femme fontaine” aho. Tsy nifantoka intsony aho, nony avy eo, satria tena menatra sy natahotra mafy. Fa amin’izao, efa fantatro ny toe-tenako ary efa nekeko.
Rova, 23 taona : Tsara loatra
Botabota izay aho, tsy dia mahatsiaro tena ho tsara tarehy koa. Lehilahy bôgôsy be izay anefa no niaraka tamiko. Tsy nampoiziko akory hoe : ho liana amiko izy, tamin’ny voalohany, fa noheveriko ho nananihany. Teny ihany ny hasarota-piaroko indraindray, rehefa misy vehivavy hafa mijerijery azy ; teo koa ny tsy fahatokisan-tenako… fa ny hiray ara-nofo voalohany no tena nampitahotra ahy. Ny fanontaniana nibosesika tao an-dohako dia ny hoe : ho tiany ve ny vatako ? Tsy hihomehezany ve aho ? Izy anefa tena tsy naninona ahy mihitsy, fa izaho no tsy nahavita nifantoka tsara, satria feno “stress” loatra.
Lili, 26 taona : Mivantambatana
Mba efa manana traikefa kely ihany aho amin’ny firaisana ara-nofo. Tiako ihany koa ny miaina zava-baovao, fa izay lehilahy anankiray izay kosa dia tena nampitahotra ahy loatra. Talohan’ny firaisana ara-nofo nataonay dia tena hafa mihitsy izy : tsara fanahy sy malefaka be. Rehefa tonga kosa ilay fotoana dia lasa nivantambatana be izy, niteny ratsy mihitsy aza, raha izay no mahalaza azy. Sady nasainy nivantambatana tahaka azy koa aho, mba hampiakatra ny filàny. Tsy andriko ny nahavitan’izay natao, dia lasa aho nitsoaka.